Seho Saint Valentin… : samy nahazo ny anjarany ireo mpifankatia | NewsMada
Na teo aza ny erika nifafy, tsy nahasakana ny mpifankatia tsy hanamarika ny fetin’izy ireo izany, hatramin’ny zoma teo. Porofon’izany ny fahombiazan’ireo hetsika samihafa teto an-dRenivohitra. Hetsika maroloko ka samy nahazo ny anjarany ny tsirairay.
Araka ny efa nampoizina, nambabo fo, indrindra ny an’ireo manam-pitiavana manokana ny gitara, ny kanto nentin’ny Malagasy guitar masters an-tsehatra, ny zoma teo tetsy amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Ny sangany amin’ity zavamaneno ity, i Teta, Chrysanto Zama ary i Joël Rabesolo no mandrafitra ity tarika ity.
Ahenoana angolam-pitiavana, matetika, ny ao anatin’ireny hira gasigasy ireny. Ho an’ireo mpifankatia mankafy izany àry, tsy diso anjara izy ireo fa notoloran-dry Zandry Gasy ny tsara indrindra, ny zoma alina teo tetsy amin’ny Piment Café Behoririka. Ity « cabaret » ity koa no nanokafan’ny tarika ny fotoam-pampisehoana amin’ity taona ity.
Tsy misy fetra ny mozika… mahatafita hafatra. Na lazaina fa gadona mavesatra aza ny rock, tsy vitsy ny hira rock mitory fitia, toy ny an-dry zalahy Mage 4, izay niara-nifaly tamin’ireo mpifankatia, ny zoma alina teo tetsy amin’ny Dôme Ankorondrano. Nitosaka ny fitiavana eo amin’ny olon-droa sy ny fitiavan’ny mpankafy ny tarika, araka ny hoe « Fitia mandrakizay ».
Azo lazaina ho niavaka ny seho tetsy amin’ny Le Louvre etsy Antaninarenina, ny zoma alina teo. Tsy fahita sy mahazatra loatra ny fiarahana amin’ny Olombelo Ricky, rehefa fetin’ny mpifankatia. Voaporofo anefa fa, na amin’ny fotoana inona na amin’ny hetsika toy inona, eo hatrany ny mpankafy azy. Marihina fa efa maromaro ny fihaonana teo amin’ny roa tonta hatramin’izay niandohan’ny taona izay.
Azo fintinina amin’ny hoe fahombiazana kosa ny « Tafaray samy tia », seho natolotr’i Dadah sy Fafah ho an’ny mpifankatia, omaly tetsy amin’ny CC Esca etsy Antanimena. Tsy mbola lefy laza sady miavaka hatrany ireto fampiaraham-peo ao amin’ny tarika Mahaleo ireto. Porofon’izany ny fahamaroan’ny olona tonga nanotrona sy niara-paly tamin’izy ireo.
Landy R., Tiana,